Ungathanda lokusebenza Track imiyalezo On Another eliphezulu ?
On: Jan 12Author: adminIzigaba: Android, Cell Ucingo Spy, Cell Ucingo Tracking, Employee Ukuqapha, Faka Hambayo Spy, IPHONE, iPhone ngeti-5 kuya Spy Software, Hambayo Ucingo Ukuqapha, Spy Mobile, Ehambayo Spy Online, Gada Inthanethi Sebenzisa, Control Zomzali, Spy Facebook Messenger, Spy For Android, Spy For iPhone, Spy iMessage, hlola Hambayo ze-smartphone, Inhloli Izingcingo, Inhloli SMS, Spy Skype, Spy Viber, Spy WhatsApp, Track GPS Indawo Ayikho Amazwana
Lokusebenza Track imiyalezo On Another eliphezulu
Uma, like eziningi ezikhona, unayo izinsolo ukweqa ukuthi umyeni wakho angase abe abalungile neze futhi kungenzeka ukudlala bezungeza, ungase ube nesithakazelo sokwazi ukuthi ungakwenza inhloli umbhalo yakhe imiyalezo?
Sekuyinto ngokuvamile sobala ukuthi umyeni ukukopela asebenzise cell phone yakhe ukuxhumana nezinye party, ngabe ngokwenze amakholi wefoni ngqo nazo, noma Ngokuvamile, ngokuthumela imiyalezo ukuthi abacabanga ukuthi ngendlela ephephile zokuxhumana ngoba lingahunyushwa kweso isusiwe umlando umakhalekhukhwini sika. Ngesikhathi esifanayo, imiyalezo Umbhalo engenayo ovela lover eyimfihlo kungabuye kweso ukusulwa emva kokufunda, ngakho ngisho hold ukuthola ucingo lwakhe ngeke ikunike noma iluphi imikhondo mayelana ukukopela kwakhe ukuziphatha.
Izindaba ezinhle, ngenxa yentuthuko kwezobuchwepheshe in esitokisini izinhlelo kanye zokusebenza, kukhona manje ngendlela ungakwazi ukuqapha yombhalo umyeni wakho - ngisho lalela ku-izingcingo zakhe, uma ufuna okungako.
Indlela Gada Imibhalo Yakhe
Angiyi ukungena izindaba zomthetho, lapha. Kwanele ukusho ukuthi emazweni amaningi futhi ithi ngabe ukwenza ngokungemthetho inhloli phone indlela omunye umuntu ngaphandle kwemvume yabo. Mina ngizoba shiya Ingabe nguwe ukuba uthole ukuthi imithetho yakho siqu esithile lapho uhlala. Kukhona futhi disclaimers, izixwayiso nezeluleko okunye zomthetho e-website ye-abathengisi yale mikhiqizo. Ake nje mina aveze ukuthi aliyona neze ngokungemthetho ukuthenga izinhlelo ezifana ukuhlola - nje kudingeka uqaphe indlela asetshenziswe.
Elathi, imikhiqizo ngokwabo Namuhla zithembekile kakhulu futhi ehambisana ezihlukahlukene imisebenzi kanye nezicelo. Kwake ilandelwe ucingo target, uyokwazi ukuba nokwaziswa zithunyelwe server online okuphephile lapho ungakwazi ukuthola konke noma nini ufisa futhi ngaso izinyathelo zakho siqu. Futhi ungakwazi ukwenza lokhu kusuka kuphi emhlabeni besebenzisa noma yini idivayisi inthanethi-ngomumo ukuthi kufanele isandla - kuhlanganise siqu mobile phone yakho.
Izinhlobo zezinto ungakwazi ukuqapha shintsha kuye ngokuthi kungakanani ufuna ukukhokha. Ekupheleni engezansi, iphasela eyisisekelo kungenza uthole ikhono inhloli imiyalezo, ubone call umlando yefoni (lokhu kuhlanganisa isikhathi, ubude kanye nenombolo esibizwa nobe ebiza - kanti igama contact uma inombolo ixhunyiwe kuze igama encwadini ikheli yefoni). Ungahlola futhi imeyili, IMS nezinye izinhlobo lengxoxo ukuthi kwenziwa inthanethi, buka Ukushweza internet umlando, uyakubona izithombe noma izithombe yathumela wathola efonini cell. Lena zonke izinto pretty onamandla. Nje ikhono ukufunda yonke imilayezo umbhalo engenayo kanye ephumayo (ngisho noma babehlala khona manjalo ususiwe) kungaba konke okudingayo ukuze uthole ukuthi kahle hle lokho ukuvuka kuya.
Enye app efika ephethe iphakethe eyisisekelo yikhono ukulandelela ukuphi yefoni (futhi ngalokho ukuphi) nge zokusebenza Google. Asikho xaxa ukuzibuza kahle hle lapho uma ethi yena kusuke out ukudlala igalofu noma okuthiwa ukusebenza sekwephuzile. Uma uhlelo lokusebenza nokubhala ibalazwe eliningiliziwe ikhombisa ucingo kwenye, uzoba ngokushesha nazi ngakho!
Ngokufanayo, uma yena Kuye ithola izingcingo ukuthi uye ngokuba imfihlo, ungakwazi ngisho babe ikhono abhale la izingcingo - noma ngisho alalele in bukhoma - uma uthuthukisa kuya kancane ezibizayo Premium amaphakheji. Lena Izinto Amazing ngempela ukuthi Eyes Private eminyakeni embalwa edlule ngabe ukunike izingalo zabo esifanele - kanti manje uthola ukusebenzisa mandla ukuhlola nge bucks ambalwa nje kanye mishini ambalwa inkinobho.
Kanye izicelo ezahlukene ezikhona ongakhetha kuzo, ungakwazi futhi baya ubude besikhathi obuhlukahlukene ukuthi ufuna ukusebenzisa uhlelo lokusebenza for. Isofthiwe sinamandla kangangokuba abantu amaningi ukuphatha ukuthola ukuthi yini okudingeka bazi esikhundleni ngokushesha. Ngenxa yalesi sizathu abakhiqizi ziye enikezwa ithuba lokukhetha ukuba nje bakhokhele 1 nyanga ukusetshenziswa - futhi lokhu kungenza ukukutholela babe ashibhe kakhulu, kunokuba kokuba ukukhokhela on Kwenzekani subscriptions noma intengo premium ukuze isetshenziswe okuqondile umkhiqizo. Kanye Izindlela zokukhokha ahlukahlukene zezinsiza kanye nesikhathi-ubude, Ungaqiniseka ukuthi le izinhlelo ukukhokhelwa zihlukene ngokoMthetho ngezindlela ukukhokha futhi abakwazi nhlobo ngokuqhubekayo.
Esinye isici konke lokhu ukuthi kufanele bazi ukuthi lapho efakwe ocingweni kwelitshe, isofthiwe owenza konke lokhu yokuqapha ngawe ungabonakali ngokuphelele umsebenzisi. Ngeke bazi ukuthi ikhona futhi ngeke indlela yokwazi ukuthi manje ifasitela eyimfihlo ezweni lakhe ukuthi bembula zonke izindlela zakhe ukukopela kuwe.
Ngithemba Ngiye unikezwa kuqonda kancane zibe yiziphi lezi zinhlelo asihlola ongakwenza nendlela lezi zinto ezisebenza. Izinkulungwane eziningi bekhohliswe kubantu abaye wathola iqiniso udaba ngokusebenzisa lezi zindlela zokwelapha, futhi lokhu ke bakwazi ukwenza noma yini afuna ukuzenza ngalesi simo bese uthole nokuphila kwabo. Uma kudingeka akwazi ukuqapha imiyalezo ukukopela wakho bendoda, lena cishe eshibhe, esheshayo nezindlela abangaziwa kunayo nikwenza futhi umane kusebenza. Ayikho kosizi xaxa, guesswork no more and more akukho anxiet
Ungazivikela kanjani i umkhondo imiyalezo kwenye ifoni khulula
– Spy on imiyalezo for Google android & iphone
– Inhloli iMessages for Iphone
– Yokusekelayo ifayela to CSV / Web-page imiyalezo sms esephepheni / PDF spy ngxoxo
Lokusebenza Track imiyalezo On Another eliphezulu no exactspy ine eziningi imisebenzi:
You Can Download: Ungathanda lokusebenza Track imiyalezo On Another eliphezulu ?
App to read text messages on another phone, App to receive text messages from another phone, App to receive text messages from another phone iphone, App to see text messages on another phone, Insiza ukulandelela imiyalezo on kwenye ifoni, Ungazivikela kanjani i umkhondo imiyalezo kwenye ifoni khulula
← Hambayo Ucingo Spy Software Thwebula Khulula
→ Ungathanda App inhloli Umlingani imiyalezo ?